Mianatra manao GIF amin'ny fomba tsotra amin'ny Photoshop | Famoronana an-tserasera
Judit Murcia | | Photoshop, maro
Un loharano tena manintona ary afaka manome kilalao betsaka antsika ny GIF. Azo antoka fa efa nandre izany ianao ary nahita azy ireo niparitaka tamin'ny Internet. Fa raha sanatria, ndao hofaritana hoe inona ny atao hoe GIF. Fanafohezana ireo fanafohezana ireo, avy amin'ny teny anglisy: Endrika fifanakalozana sary. Tsy inona izany fa ny endrika mamela antsika hanao sary mihetsika.
Ny fitaovana hianarantsika hanatanterahana an'io loharano io dia Adobe Photoshop. Ho hitanao fa tena tsotra izany, mila izany fotsiny isika manana hevitra tsara ary araraoty tsara ny fahaizantsika mamorona.
1 Fizarana isaky ny sosona
2 Mamorona GIF tsikelikely
3 Andininy hodinihina
Fizarana isaky ny sosona
Hanombohana azy dia ilaina ny mahatakatra fa ny fanaovana GIF dia tsy maintsy manana ny endritsika na ny fanoharana isika voazarazara ho sosona samihafaRaha atao teny hafa, ny hetsika na zavatra tsirairay izay tiantsika ampiana amin'ny filaharana tsirairay dia tsy maintsy apetraka amin'ny sosona samihafa.
Mamorona GIF tsikelikely
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika raha vantany vao tafiditra ao amin'ny Adobe Photoshop isika dia mankany amin'ny menio lehibe ary araho ity lalana manaraka ity: Window - Animation. Hiseho eo ambany ny varavarankely. Toy ny sosona, tsy maintsy ataontsika izany ampio frame ho an'ny seho tsirairay. Amin'ny boaty voafantina dia tsy maintsy asehontsika izay sosona tokony ho hita. Tsy maintsy ataontsika amin'ny zana-kazo tsirairay izany, ary ampio na hamafana sosona. Mba hanondroana ireo sosona izay ho hita dia mila fotsiny isika manodina na mamono ny fahitana (maso), mora be izany satria izy no aseho eo amin'ny solaitrabe.
Mba hahatratrarana vokatra tsara indrindra dia tokony hifantoka amin'ireo singa toy ny faharetana isaky ny seho. Raha ny mahazatra dia mifototra amin'ny segondra isika, asehontsika ny faharetan'ny zana-tsipìka izay hita eo ambanin'ny kianja tsirairay. Raha tsindrio dia hiseho ny varavarankely hanondro ny segondra marina. Afaka manome anao izahay fotoana samy hafa isaky ny seho.
Azontsika atao koa ny mamaritra ny fotoana tiantsika hamerenana ny hetsika. Izy io dia mety tsy manam-petra, izany hoe tsy mitsahatra miteraka na, mifanohitra amin'izay, manondro ny isan'ny fotoana marina mandra-pijanony.
Ary farany, hitahiry ilay rakitra izahay amin'ny endrika GIF ary mihetsika mandeha ho azy no hapetraka ao amin'ilay antontan-taratasy. Araka ny hitanao dia mora be ny manao GIF amin'ny Photoshop ka izany no ampirisihinay anao hanao atiny mihetsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Mianatra manao GIF amin'ny Photoshop izahay